Esi mpikota onu na decompress faịlụ na Linux | Site na Linux
Isaac | | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
N’isiokwu a anyị ga-akụziri gị mpikota onu ma decompress faịlụ site na nkesa GNU / Linux kachasị amasị gị, ha niile na-eji iwu sitere na njikwa. Ọ bụ isiokwu e bu n'uche maka ndị mbido na ya, anyị agaghị etinye ọgwụgwọ tarball dị ka nkuzi ndị ọzọ, ebe ọ bụ naanị na ọ ga-egosi etu esi arụ mkpakọ na decompression na-enweghị ngwugwu ngwongwo magburu onwe ya.
Ọ bụ ezie na mkpakọ na decompression dịtụ mfe, ndị ọrụ na-achọkarị ịntanetị maka otu esi eme omume ndị a. Echere m na n'adịghị ka sistemụ ndị ọzọ dị ka MacOS na Windows ebe a na-eji ngwa ọrụ eserese eserese na nghọta, na GNU / Linux ọzọ formats na ngwaọrụ dịgasị iche iche maka onye ọ bụla n'ime ha, ọ bụ ezie na e nwekwara ngwaọrụ ndị dị mfe na ọkwa ọkwa ...
Maka mkpakọ na decompression anyị ga-eji nchịkọta abụọ dị mkpa, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịbụ usoro kachasị achọ na ndị anyị na-ahụ ọtụtụ oge mgbe anyị na-arụ ọrụ Unix-dị ka usoro. Ana m ekwu maka gzip na bzip2.
1 Na-arụ ọrụ na gzip
2 Na-arụ ọrụ na bzip2
Na-arụ ọrụ na gzip
para mpikota onu na gzip, usoro anyị ga - ejikwa bụ Lempel-Zi (LZ77), ọ bụghị ZIP dị ka ndị dị otu a, ebe aha ahụ nwere ike ibute ọgbaghara. Aha ahụ sitere na GNU ZIP, e mekwara ya ka ọ bụrụ dochie usoro ZIP, mana ọ bụghị otu. Achọrọ m ime ka nke ahụ doo anya ... Ọfọn, ịpịkọta faịlụ:
Nke a site na faịlụ aha ya na nke mbụ ya na ndọtị .gz, na ihe atụ gara aga ọ ga-abụ document.txt.gz. Kama, n'ihi na gbanwee aha mmepụta site na otu onye:
para itopusi Ihe etinyerelarịrị dị mfe, ọ bụ ezie na anyị nwere ike iji iwu abụọ dị iche na otu mmetụta ahụ:
Anyị ga-enweta faịlụ ahụ unzipped enweghị .gz ndọtị.
Na-arụ ọrụ na bzip2
Na usoro nke bzip2, yiri usoro ihe gara aga, mana ya na algorithm mkpakọ dị iche nke akpọrọ Burrows-Wheeler na nzuzo Huffman. Mgbatị anyị nwere na nke a bụ .bz2. Iji mpikota onu faịlụ, anyị ga-eji:
Nke a na-apụta na abịakọrọ document.txt.bz2. Anyị nwekwara ike ịdị iche na mmepụta aha na -c nhọrọ:
Maka nkụda mmụọ, m ga - eji nhọrọ dd nke ngwa bunzip2 nke bụ utu aha:
Maka ozi ndị ọzọ ị nwere ike iji nwoke ndị iwu sochiri ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Esi mpikota onu na decompress faịlụ na Linux
Daalụ maka post gị, ha bara uru mgbe niile.
Ikekwe ọ ga-adọrọ mmasị ịkọwa xz, ebe a na-ejikwa ya ntakịrị. Ọ na-agbadata ebe dị n'etiti bzip2 (ngwa ngwa, mana ọ na-agbakọ ọtụtụ) na gzip (ngwa ngwa, mana obere ọrụ). Nke a na nnukwu ọkwa, n'ihi na dị ka ihe niile ... ọ dabere. Tars ndị gụnyere na Debian / Ubuntu .deb faịlụ na-abịakarị abịarute na usoro xz.
Tozọ iji ya yiri ndị ọzọ sos iwu.
Zaghachi Jaime Perea
Ndewo, m ga-achọ ịrịọ ka eme nke a mana jiri tar.gz ebe ọ bụ na a na-ejikarị ya eme ihe (n'echiche m dịka ihe niile m si na ịntanetị)
Kedu ihe ha na-ekwu banyere usoro ndị ọzọ na-ewu ewu ma na-agbatị ọtụtụ dị ka .7z? Ha kwesịkwara ịkpọ ha aha
Ndewo Jose, ihe na-eme na faịlụ tar.gz bụ na ị na-eji iwu ọzọ nke bụ tar na na nke a iwu tar n'onwe ya anaghị agbakọ (ma ọ bụ decompress) mana ejiri ya na-emekọ ihe (ma ọ bụ ungroup) ọtụtụ faịlụ na otu, nke a nwere njikọta na iwu gzip na bzip2 nke ị nwere ike mpikota onu ma decompress.
Are kwenyere nke ọma, Ernesto, maka usoro free nke 7z nke na-enye ohere maka onwe ya na Windows, dochie zip na rar, ma ha ekwughi ya?
Na 21st narị afọ na ka na-eji iwu iji mpikota onu ihe di nfe? Edemede a dị mwute
Ma eleghị anya ọ ga-abụkwa ihe na-atọ ụtọ
Digitize VHS teepu site na nkesa GNU / Linux gị